Siduu isku Badalay Muuqaalka Wajiga Arsene Wenger Mudadii uu Maamulayay Arsenal – Gool FM
Siduu isku Badalay Muuqaalka Wajiga Arsene Wenger Mudadii uu Maamulayay Arsenal
( England ) 21 April 2018. Arsene Wenger ayaa shaaciyay jimcihii inuu ka dhaqaaqi doono kooxda Arsenal marka uu dhamaado xagaagan kadib 22 sano uu maamulayay.
Tan iyo markii loo magacaabay shaqada kooxda bishii October ee sanadkii 1996, ninka reer Frenca ayaa kooxda u horseeday qaab ciyaareed qurux badan, garoon cusub oo ay naadigu yeelatay iyo ku guuleysigii horyaalka Premier league sanadkii 2003/04 oo aan kooxda laga badin xiligaas kulamada horyaalka.
Mudda uu wenger hayo shaqada naadiga waqooyiga London wuxuu u qaaday sedax Premier League, todoba FA Cup taaso ka dhigan in guud ahaan kooxda u qaaday 10 koob xili uu damac kaga jiro xagaagan koobka Europa League.
Waqtigaas dheer uu Arsenal maamulayo, Macalin wenger ayaa la kulmay arimo kala duwan oo aan ka marneen qaab dhismeedka nolashiisa.
Hadaba halkaan waxaan kuugu soo gudbineynaa qaabkii uu isku badalay Muqaalka waji ee Wenger kaasoo mudada rubac qarniga ku dhaw u shaqeynaayay kooxda Gunners.
Sawirka Midig waa 1996 marka kooxda uu yimid halka kalna waa 1997
Waa sanadihii 1998 iyo 1999
Waa sanadihii 2000 iyo 2001
Waa Sanadihii 2002 iyo 2003
Waa Sanadihii 2004 iyo 2005
Waa Sanadihii 2006 iyo 2007
Waa Sanadihii 2008 iyo 2009
Waa Sanadihii 2010 iyo 2011
Waa Sanadihii 2012 iyo 2013
Waa Sanadihii 2014 iyo 2015
Waa Sanadihii 2016 iyo 2017.
Roma oo akhbaar wanaagsan helaysa ka hor kulanka Liverpool
Muxuu ka yiri Patrick Vieira tababarida kooxdiisii hore ee Arsenal?